Astaamaha iyo muhiimada dhismayaasha | Saadaasha Shabakadda
Jawigayagu wuxuu leeyahay lakabyo kala duwan taas oo ay ku jiraan gaasas kala duwan oo ka kooban halabuurro kala duwan. Lakab kasta oo jawigu leeyahay wuxuu leeyahay shaqadiisa iyo astaamo u gaar ah oo kaga duwan kuwa kale.
Waxaan haynaa meesha loo yaqaan 'troposphere' kaas oo ah lakabka jawiga aan ku nool nahay oo ay ku wada dhacaan dhammaan arrimaha saadaasha hawadu, stratosphere taas oo ah lakabka jawiga ay ku yaalliin lakabka ozone, meeriska halka ay nalal waqooyi ka dhacaan iyo heerkulka taasi waxay xuduud la leedahay bannaanka sare iyo heerkulka oo aad u sarreeya. Qoraalkan waxaan diiradda ku saari doonnaa dabaqadda loo yaqaan 'stratosphere' iyo ahmiyadda ay u leedahay nolosha dhulkeenna.
1 Astaamaha Stratosphere
2 Lakabka ozone
3 Cawaaqibta daloolka lakabka ozone
4 Saameynta diyaaradaha ku leeyihiin stratosphere
5 Xiisaha Stratosphere
Stratosphere waxay joogtaa meel sare oo ah qiyaastii 10-15 km oo dherer ah oo fidisa illaa 45-50 km. Heerkulka stratosphere wuu kala duwan yahay sida soo socota: marka hore, wuxuu bilaabmayaa inuu xasilloon yahay (maxaa yeelay waxaa laga helaa meelaha ugu sarreeya tropopause halkaas oo heerkulku weli ahaado) oo aad u hooseeya. Markaan sare u kacno, heerkulka stratosphere wuu kordhayaa, maadaama uu sii nuugo shucaaca qoraxda. Dabeecadda heerkulka troposphere-ka waxay ka shaqeysaa ka soo horjeedka waxa goos gooska aan ku nool nahay ku kacdo, taas oo ah, halkii laga dhimi lahaa dhererka, way sii kordheysaa.
Meelaha loo yaqaan 'stratosphere' ma jiraan wax dhaqdhaqaaq ah oo hawo ah oo hawadu leedahay, laakiin dabaylaha jiifa ayaa had iyo jeer gaari kara 200 km / saacaddii. Dhibaatada dabayshani leedahay ayaa ah walax kasta oo gaadha stratosphere way ku baahsan tahay meeraha oo dhan. Tusaale tan waa CFCs. Gaasaskan oo ka kooban koloriin iyo fluorine ayaa burburiya lakabka ozone waxayna ku faafaan meeraha oo dhan sababo la xiriira dabaylo xoog leh oo ka imanaya stratosphere.
Si dhib leh kuma jiraan daruuro ama qaababka kale ee saadaasha hawada ee stratosphere. Mararka qaarkood dadku badanaa waxay isku qaldaan kororka kuleylka ee stratosphere iyo u dhawaanshaha Qorraxda. Waa macquul in laga fikiro in midka ugu dhow uu u dhow yahay Qorraxda, waana sii kululaan doonaa. Si kastaba ha noqotee, tani maahan kiiska sidaas. Goobta aan ku kulmi karno lakabka ozone ee caanka ah. Lakabka ozone laftiisa laftiisa maahan "lakab", laakiin waa aag jawiga ka mid ah halka ay ku urursan tahay gaaskani uu aad uga badan yahay jawiga intiisa kale. Maaddooyinka loo yaqaan 'Ozone molecule' ayaa mas'uul ka ah soo nuugista shucaaca qorraxda ee si toos ah nooga dhaca qoraxda una oggolaanaya nolosha Dunida. Molikiyuulladaas oo nuugaya falaadhaha qorraxda 'ultraviolet rays' waxay u beddelaan tamarta kuleylka, sidaas darteedna, waa sababta ay heerkulka stratosphere u kordho dhererkiisa.
Maxaa yeelay waxaa jira tropopause taas oo hawadu aad u deggan tahay oo aysan jirin dabeylo qulqulaya, isweydaarsiga jajabyada u dhexeeya troposphere iyo stratosphere waa ku dhowaad eber. Sababtaas awgeed ayay adag tahay in uumiga biyuhu ka baxo stratosphere. Tan macnaheedu waxa weeye in daruuraha ku jira stratosphere kaliya ay samaysmayaan haddii ay aad u qabow tahay in xaddiga yar ee biyaha jira ay isku soo ururaan oo ay samaysmaan baraf. Waxaa loogu yeeraa daruuro baraf baraf ah oo roob ma keenayaan.
Dhammaadka stratosphere-ka waa stratopause. Waa aag jawiga ka mid ah halka uruurinta ozone sare waxay dhammaataa heerkulkiisuna wuxuu noqdaa mid xasilloon (qiyaastii 0 darajo centigrade). Kala-goysyada 'stratopause' waa kan u oggolaada mesosphere-ka.
Xamaasad ahaan, kaliya iskudhisyada kiimikada ee leh cimri dheer ayaa ah kuwa gaari kara stratosphere. Hada haa, markey halkaas joogaan, waxay joogi karaan waqti dheer. Tusaale ahaan, walxaha ay soo saaraan qaraxyada waaweyn ee folkaanaha ayaa awood u leh inay ku sii nagaadaan stratosphere muddo ku dhow laba sano.
Lakabka ozone had iyo jeer ma laha isku uruurin gaaskan ka fog Meelaha loo yaqaan 'stratosphere', ozone si isdaba joog ah ayaa loo sameeyaa isla markaana loo baabi'iyaa isla waqtigaas. Si ozone u sameysmo, falaaraha ileyska qorraxda waa inay u jabaan molecule oksijiin ah (O2) labo atam oo oksijiin ah (O). Mid ka mid ah atamkaan markii uu la kulmayo molekulle kale ayaa falcelinaya sameynta ozone (O3).
Sidan ayaa loo sameeyaa molecules ozone. Si kastaba ha noqotee, dabiici ahaan, sida loo abuuray oo kale, waxaa ku baaba'a shucaaca qorraxda. Falaaraha iftiinka ee qoraxda ka dhaca waxay ku garaacaan aaladda loo yaqaan 'ozone molecule' oo mar labaad ayay baabi'isaa si ay u dhaliso molecule oksijiin (O2) iyo oksijiin oksijiin ah (O). Hada atamka oksijiin wuxuu la falgalaa molekal kale oo ozone ah si uu u sameeyo laba moleejiin oksijiin ah, iyo wixii la mid ah. Waa meerto dabiici ah oo isku dheelitiran sameynta iyo baabi'inta maaddooyinka ozone. Sidan oo kale, lakabkan gaasasku wuxuu soo nuugi karaa qadar aad u badan oo shucaac ultraviolet ah oo naga difaaci kara.
Tani waxay ahayd arrin muddo dheer ah. Wareeg ah halka isku-uruurinta ozone-ka lagu hayay meel deggan oo joogto ah waqti ka dib. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira hab kale oo lagu baabi'iyo ozone-ka ku jira jawiga. Chlorofluorocarbons (CFCs) aad bay ugu deggan yihiin jawiga sidaas darteedna way gaari karaan stratosphere. Gaasaskani waxay leeyihiin nolol aad u dheer, laakiin markay gaaraan stratosphere, falaadhaha ultraviolet-ka ee ka yimaada Qorraxda waxay baabi'iyaan maaddooyinka, taasoo keenta in koloriin xagjir ah oo aad u falceliya Kuwani xagjirka falcelinta ah waxay burburiyaan ozone molecules, sidaa darteed qadarka ozone ee la baabi'iyay wadar ahaan wuu ka ballaaran yahay kan la soo saaray. Sidan oo kale, isku dheelitirnaanta jiilka iyo baabi'inta molikuyuullada loo yaqaan 'ozone molecule' ee awood u leh inay soo nuugaan shucaaca qorraxda ee waxyeellada innoogu ah.
Cawaaqibta daloolka lakabka ozone
Nasiib darrose, waagii hore mowduucan si faahfaahsan looma aqoon, sidaa darteed hawlaha bani'aadamka (isticmaalka aaladda loo yaqaan 'chlorofluorocarbon aerosols') waxay ku guuleysteen inay gaaraan stratosphere xaddi badan oo koloriin iyo bromine ah oo burburiya maaddooyinka ozone. Sababtoo ah falcelintu waxay u baahan tahay iftiin iyo sameysmo daruuro cadceedda oo heerkulkeedu aad u hooseeyo, heerarka ugu hooseeya ee ozone waxay dhacaan guga Antarctica guntinta ozonena waxaa laga sameeyaa gaar ahaan Antarctica. Godadkan ozone waxay sababaan shucaac aad u badan oo ultraviolet ah inuu gaaro dusha sare ee dhulka oo dardar galiyo dhalaalinta.
Bini'aadamka, hoos u dhaca lakabka ozone waxay sababtay kororka dhacdooyinka kansarka maqaarka qaddarka badan ee shucaaca qoraxda ee na soo gaara awgood. Dhirta sidoo kale waa la saameeyaa, gaar ahaan kuwa koraya oo daciif ah oo aan tabar yarayn jiridooda iyo caleentiisa.
Saameynta diyaaradaha ku leeyihiin stratosphere
Diyaaraduhu sidoo kale waxay saameyn ku yeesheen stratosphere, maxaa yeelay waxay badanaa ku duulaan joog u dhexeeya 10 ilaa 12 km, taas oo ah, agagaarka tropopause iyo bilowga stratosphere. Maaddaama taraafikada hawadu korortay, qiiqa kaarboon dioxide (CO2), uumiga biyaha (H2O), nitrogen oxides (NOx), baaruud oksaydh (SOx) iyo danbas ayaa ku kordhay jawiga u dhexeeya troposphere sare iyo stratosphere hoose.
Maanta, diyaaradaha kaliya waxay sababaan inta udhaxeysa 2 iyo 3% qiiqa hawada lagu sii daayo ee adduunka. Tani muhiimad weyn maahan marka laga hadlayo kuleylka adduunka sidoo kale. Si kastaba ha noqotee, waxa runtii muhiim ka ah diyaaraduhu waa in gaasaska ay sii daayaan ay ku sameeyaan qaybta sare ee troposphere. Tani waxay keentaa uumiga biyaha ee soo baxa inay kordhiyaan fursadaha sameynta daruuraha cirrus ee xajiya kuleylka badan ee Dunida isla markaana gacan ka geysta kuleylka adduunka.
Dhinaca kale, oksaydhyada oksaydh ee ay diyaaraduhu soo daayaan sidoo kale waa khatar, maaddaama ay la xiriiraan luminta ozone-ka ku yaal stratosphere. Waa inaan ka fikirnaa inkasta oo gaasasaska aqalka dhirta lagu koriyo ee ay soo daayaan diyaaraduhu aysan haysan nolol aad u dheer oo ay ku gaaraan stratosphere, inay sidaas sameyn karaan, maxaa yeelay waxaa lagu sii daayaa meel aad ugu dhow.
Lakabkan jawigu wuxuu leeyahay xoogaa xiiso leh oo naga yaabin kara. Waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah:
Cufnaanta hawada waa 10% ka hooseeya in dhulka dushiisa
Heerkulka heerkulka hoose waa hareeraha -56 digrii celcelis ahaan iyo xaddiga hawada ayaa gaaraya 200 kiilomitir saacaddii.
Waxaa jira warbixino xaqiijinaya jiritaanka noolaha yaryar ku nool stratosphere. Microbes-yadaas waxaa la rumeeysan yahay inay ka yimaadeen hawada sare. Waxay yihiin kudka bakteeriyada, noolaha aadka u adkaysta ee samaysan kara lakab difaac ah oo ku xeeran naftooda sidaa darteedna ka badbaada heerkulka hoose, xaaladaha qalalan iyo heerarka sare ee shucaaca ee laga helo stratosphere.
Sidaad aragto, jawigu hawlo waawayn ayuu noo hayaa annaga iyo inta kale ee nool ee ku nool meeraheenna. Stratosphere-ka waxaa ku jira wax lagama maarmaan u ah badbaadinteenna iyo in kastoo ay dhererkeedu dheer yahay, waa inaan ilaashanno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Astaamaha iyo muhiimadda stratosphere